Coronavirus: Fepetra momba ny Hetra
Ho fampiarana ny tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus dia tsy miasa ireo mpiasa ao amin'ny Ministeran'ny vola sy ny teti-bola hafa tsy: - Ireo mpiasa miadidy ny famoaham-bola maika - Ireo mpiasa amin'ny fandoavana karama sy ny fisotroan-dronono sy ny karaman'ny ECD - Ireo mpiasa mpanamarina ny vola mikasika ny valanaretina Coronavirus - Ireo mpiasa mahakasika ny famoahan'entana amin'ny faditseranana - Ireo mpiasa mandray ny fiantohana ny lany amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary amin'ny mpiasam-panjakana.
lundi, 23 mars 2020 13:02
Coronavirus: Niteraka lonilony amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa orinasa tsy miankina
Napetraky ny fitondram-panjakana fa tsy misy mahazo mivoaka ny trano, ary raha andeha hiatsena aza dia olona iray ao an-tokatrano ihany no mahazo mivoaka arak'izay fandaminan'ny Kaominina sy ny Fokontany, izany dia mihatra avy hatrany ho an'Alamanga sy Toamasina. Ireo mpiasan'ny orinasa tsy miankina kosa dia arakaraky ny tompon'ny orinasa sy izay fandaminan'ny ministera no tsy hiasany. Efa mandeha an-tongotra ireo mpiasan'ny orinasa tsy miankina, ary efa matahotra ny hifindran'ny valanaretina na eny an-dalana na any am-piasana, nefa izao tratran'ny antsonjay hoe esorina amin'ny fotoanan'ny congé na ny zo tsy fiasana isan-taona ho an'ireo izay tsy amonjy fiasana. Ireo mpampiasa koa anefa milaza ny tsy izaka irery ny fatiantoka sy ny karaman'ny mpiasa tsy afaka miasa satria ny orinasa efa samy sahirana avokoa.
samedi, 21 mars 2020 13:34
Sambava: 25 000 Ariary ny kilaon’ny tongolo lay, 5 000 Ariary tongolobe
Miaka-bidy ny tongolo eto Sambava. Raha ny hita eny an-tsena tamin’ity marainan’ity sabotsy 21 marsa 2020 ity, andro voalohany taorian’ny nanambaran’ny filoha Andry Rajoelina fa misy olona telo voan’ny coronavirus eto Madagasikara, dia 25 000 Ariary ny tongolo lay iray kilao ary 5 000 Ariary tongolobe. (Jeroe Sary Tohiny)
Nanao fampandrenesana ny vahoaka ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) fa milamina sy mirindra tsy misy ahiana ny famatsiana solika ny nosintsika nanomboka ny faran’ny taona 2019. Maharitra antsika amam-bolana ny tahiry azo amin’ireo solika vao nafarana, ary ampy tsara amin’ny filana isan’andro ny solika eto Madagasikara. Mbola betsaka ny tahiry fiandry mitoby ao Toamasina ankotran’ireo solika vao tonga tamin’ny herinandro lasa iny. Feno tanteraka amin’izao fotoana Ireo toby fitahirizana roa lehibe eto Antananarivo (Alarobia sy Soanierana). Ny vokatra taterina isan’andro avy any Toamasina dia betsaka noho ny filan’ny renivohitra sy ny manodidina, hoy hatrany ny fanazavana. Mizotra an-tsakany sy an-davany ihany koa ny famatsiana ireo toby maro hafa manerana ny Nosy. Manome vahana ny fiparitahan’ilay otrik’aretina “coronavirus” ny fitangorongoronana hoy ny fanentanana ataon’ny OMH.
Tsy nitsaha-nitotongana ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena noho ny fihenan’ny tinady, nateraky ny valanaretina coronavirus. Tafidina 25 dolara ny iray baril (1 baril = 159 litatra) omaly alarobia 18 marsa 2020. Ity no vidy ambany indrindra indray hatramin’ny 2003 no mankaty. Ry zareo Sinoa no tena mpanjifa solika betsaka indrindra manerantany.
jeudi, 19 mars 2020 07:34
Fanakatonana ny sisintany: Tokony nifampierana mialoha ny nandraisana ny fepetra, hoy ny GEFP
Manahy ny mety ho voka-dratsy hateraky ny fanakatonana ny sisintany ho fisoroana ny fidiran’ny coronavirus eto Madagasikara ny GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires), izay nanao fivoriambe ara-potoana tetsy amin’ny Novotel Alarobia ny 18 mars 2020. Nilaza Rakotoarisoa Hery Lanto, filohan’ny GEFP fa tokony hisy ihany ny fifampiresahana teo amin’ny fanjakana sy ireo orinasa satria mety hiteraka krizy ara-toekarena sy sosialy hateraky ny tsy fisian’ny asa atao ho an’ny orinasa maro eto an-toerana ny vokatr’io fepetra io. Misy 106 eo ny mpikambana ao amin’ny GEFP ary misehatra amin’ny lamba ny atsasa-manila an’ireo.
1 000 Ariary no ividianan’ny mpanangom-bokatra ny iray kilao amin’ny felana Ylang Ylang aty Nosy-Be amin’izao. 500 Ariary aza amin’ny toerana sasany, raha toa ka 6 000 Ariary izany teo aloha. Betsaka ny tolotra noho ny tinady, ka izay no mampitotongana ny vidiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Efa mifaninana amin’i Nosy Be ihany koa amin’izao ny vokatra avy atsy amin’ny nosy Mayotte ary Comores. Ny Ylang Ylang moa dia ampiasaina indrindra amin'ny ranomanitra, na fanomezana fofona tsara ny savony, shampoing, na hanaovana huile essentielle. Raha any ivelany dia 45 euro na 190 000 ariary eo ny 100ml ny huile essentielle 100% pure. (Jereo Sary Tohiny)
Efa afaka hifamezivezen'ny mpitatitra an-dranomamy ny lakandranon'i Pangalana, manomboka eo Toamasina hatrany Mananjary. Natomboka tamin’ny 14 septambra 2019 ny fanadiovana, nanesorana ireo fasika manentsina ny lakandranon'i Pangalana mba ho azo hifamezivezena. Maherin'ny 100 taonina isan'andro ny entana mifamezivezy amin’iny Pangalana iny.
Fiara miisa 35, koperativa KOFIFIMA, amin’ny zotra H Sabotsy Namehana – Andravohangy Antananarivo no nametrahana GPS (Global Positioning System) ho fanatsarana ny fitateram-bahoaka. Hanampy ny fanatsarana ny tolotra homena ny mpanjifa ny GPS, eo ihany koa ny fandrindrana ny fivezivezen’ny fiarakodia sy ny fanamaivanana ny fitohanan’ny fifamoivoizana.